Burcad Kenyan ah oo Magaalada Nairobi ku toogtay Ganacsade Somaliyed – STAR FM SOMALIA
Burcad Kenyan ah oo Magaalada Nairobi ku toogtay Ganacsade Somaliyed
Saddex nin oo Burcad Kenyan ah ayaa xalay fiidkii waxa ay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku toogteen Ganacsade Somaliyed oo lagu magacaabi jiray Mustaf Sheekh C/laahi.
Dilka Ganacsadaha ayaa yimid, kadib markii dableyda hubaysan ay toogteen, xilli Mustaf uu isku diyaarinaayay xirista goobtiisa ganacsi, islamarkaana uu qorsheynaayay inuu aado hooygiisa.
Balse inta aanu meesha ganacsi xirin, ayaa rag hubaysan oo Burcad Kenyan ah, kuwaasi oo gaaraya Tiradooda Saddex Nin ay rasaas ku fureen isaga oo ku dhex jira goobtiisa ganacsi, waxaana xabadaha qaarkood ay kaga dhaceen wadnaha.
Burcadii Kenyan-ka aheyd ayaa gashay goobta ganacsiga kadibna waxa ay halkaasi ka qaateen lacago, iyaga oo meesha ka baxsaday.
Dad Somali ah oo yaqaanay Mustaf islamarkaana maqlaayay dhawaqa rasaasta ayaa ku soo yaacay goobta ganacsiga, kadibna waxa ay halkaasi ka qaadeen Mustaf oo dhaawac ah, waxaa loola cararay Isbitaalka, balse ugu dambeyn dhaawicii soo gaaray ayuu u dhintay.
Saddexdii nin ee hubaysnaa ayaa ka baxsaday goobtii ay dilka ka geysteen iyaga oo horay u sii qaatay lacagihii ay ka dhaceen Dukaanka Mustaf oo ku yaallo Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi.
Booliska oo dhacdadaan ku soo baxay ayaa sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan sida uu ku dhacay dilka Ganacsadahaasi Somaliyed loogu geystay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Hadliye “Soomaaliya kuma jirto wadamada Ciidamada u diraya Koofurta Sudan”